समानान्तर Samanantar: 2011
Posted by Govinda at 12/23/2011 08:33:00 PM No comments:
अगिल्लो साता लाजिम्पाटमा रुट नं ५ को माइक्रोबस चडेर सुन्धारा आउँदा बाटाभर एकजना भलाद्मी टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै थिए। सुरुमा त उनका कुरामा मैले ध्यानै दिइन। लैनचौर आइपुगेपछि हनुमान ढोकामा थनाएको प्रसंग सुनेर कान ठाडा भए। उनले लैनचौरबाट भद्रकालीसम्म आइपुग्दा मोबाइलमा गरेको कुराकानी र बिलौनाको सारांश :
उनको मूल घर काठमाडौंबाहिर पहाडमा सानो गाउँले बजारमा हुनुपर्छ। भारतीय सेनाबाट पेन्सनमा आउँदा उनी ४० वर्ष जतिका थिए होलान्। घरमा पत्नी र दुई बहिनी छोरी थिए। गाउँमा आएपछि उनले खाडीमा काम पाइने र राम्रै कमाइ हुने थाहा पाए। खेतीपाती गरेर गाउँमा बस्न मन थिएन। पेन्सनमात्रले राम्ररी गुजाहा नचल्ने भएपछि खाडीतिर जाने सल्लाह गरे। पत्नी छोरीहरुलाई पढाउन उनीहरुलाई लिएर काठमाडौं बस्ने भइन्। काठमाडौंमा डेरा खोजेर र छोरीहरुलाई स्कुलमा भर्ना गरेर उनी खाडीतिर उँडे। ठुली १० मा र सानी ६ मा पढ्दैथिए। खाडीमा सुरक्षा गार्डकै काम पाए। महिनैपिच्छे पत्नीका नाममा पैसा पठाउन थाले।
अर्को वर्ष ठुलीले एसएलसी पास गरी। उनलाई निकै रमाइलो लाग्यो। नर्सिङ पढ्नका लागि पैसा पुगेन भनेकाले सरसपाट गरेर दुई लाख रुपियाँ एकमुष्ट पठाइदिए। सातैपिच्छे फोनमा कुराकानी हुन्थ्यो। वर्षदिन जति काठमाडौबाट फोन जान्थ्यो र उनले उताबाट गर्थे। बिस्तारै फोन १५ दिनजतिमा हुन थाल्यो र उनले गरेमात्र सम्पर्क हुन्थ्यो। पछि त उनले फोन गर्दा पनि सम्पर्क हुन गाह्रो हुँदै गयो। एक दिन त मोबाइल नम्बर नै नमिलेको सन्देश सुनियो। हरायो वा बिग्य्रो होला भन्ने ठाने। पैसा पठाउँदै गए।
गएको अढाइ वर्षतिर अचानक एक दिन कान्छी छोरी सिकिस्त बिरामी भई अप्रेसन गर्न पैसा चाहियो भनेर फोन आयो। उनले खोजमेल गरेर लाख रुपियाँ पठाए। आफू पनि आउँछु भने। पत्नीले आत्तिन पर्दैन भनिन्। तीन वर्ष पुगेपछि आए हुन्छ भनिन्। त्यसपछि घरसँग सम्पर्क भएन। छोरीको अप्रेसनबारे पनि थाहा पाएनन्। मन आत्तिए पनि उनी छोरीहरूको पढाइ र उपचारका लागि पठाएको पैसा तिर्न पुग्नेजति कमाएरमात्र जाने अठोट गरेर बसे।
अन्ततः उनी फर्कने दिन पनि आयो। फोन सम्पर्क नभएकाले विमानस्थलमा उनलाई लिन कोही आएनन्। ट्याक्सी लिएर डेरामा पुगे। उनलाई देखेपछि पनि पत्नीको अनुहार उज्यालो भएन। छोरी पनि घरमा थिएनन्। पत्नीले उनलाई ठुली छोरीले प्रेम विवाह गरेकी र सानीलाई छात्रावासमा राखेको खबर दिइन्। उनी थाकेका थिए। सुते। भोलिपल्ट बिहान उठ्दा उनकी पत्नी थिइनन्। किनमेल गर्न गएकी होली भनेर पर्खेछन्। तर, उनी दिनभर आइनन्। साँझ, घरबेटीले त्यहाँ एउटा गुन्डाजस्तो केटो आउने गरेको सुटुक्क सुनाए। बल्ल, उनले रहस्य बुझ्न थाले। छोरी भेट्न स्कुलमा गए। सानी बिरामी भएकै हैन रहेछ। उनी रन्थनिएर पत्नीको माइत र आफन्तहरूकहाँ सबैतिर खोजखबर गरे। कतै नभेटेपछि प्रहरीलाई खोजतलास गरिपाउन निवेदन दिएछन्। ठुली छोरीसँग भेट भएपछि उसले आमाको चर्तीकला सहन नसकेपछि आफूलाई माया गर्ने केटासँग घरजम गरेको भनिछ। दसैँमा छोरीजुवाइँलाई टीकाटाला गरेछन्। स्कुलको शुल्क तिरेको रहेनछ। त्यो तिरेछन् र सानी छोरीलाई छात्रावासमै राख्ने व्यवस्था मिलाएछन्। अनि प्रहरीकोमा धाउन थालेछन्।
प्रहरीले उनलाई एक दिन हनुमान ढोका बोलायो। उनकी पत्नी फेला परिछन्। म तिमीसँग बस्दिन त्यसैले छाडेर हिँडेको भनिन् रे। अनि पैसाका बारेमा सोध्दा केही जबाफै दिइनन् रे। प्रहरीलाई पत्नीले बताएअनुसार उनको प्रेमीले धोका दियो रे। छोरीको पढाइ र अप्रेसनका लागि खर्च माग्न पनि उसैले सिकाएको हो रे। त्यो पैसा लिएर दुई जना कतै गई सानोतिनो व्यापार गरेर गुजारा चलाउने उनीहरूको सल्लाह रहेछ। पैसा आउनेबित्तिकै उनले उसैलाई राख्न दिएकी रहिछन्। उनैका नाममा बैंकमा जम्मा गरेको रहेछ। 'तिमी एटीएम कार्ड चलाउन जान्दिनौ' भनेर उसैले राखेको थियो रे। तीन लाख रुपियाँ बैंकका जम्मा भएको केही दिनपछि प्रेमीसँग उनको भेटघाटै भएको छैन रे। पछि बैंकमा गएर बुझ्दा त खातामा दुई हजार रुपियाँमात्र रहेछ रे। पति आएपछि उनी उसैलाई भेट्न भनेर घरबाट निस्केकी रे। उनको पेटमा उसको गर्भ छ रे।
फोन सुनिरहेको व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेर ती बिचरा लाहुरे भाइले सोधे : ' सर ! अब म के गरौँ? ' उनी भद्रकालीमा ओर्ले। उनलाई ती सरले के सल्लाह दिए मैले सुन्न पाइन।
Posted by Govinda at 12/17/2011 05:55:00 AM No comments:
संवैधानिक परिषद् बाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई तत्काल हटाउने माग गरेर नेपाली समाजका केही 'स्वनामधन्य' महानुभावहरूले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र दिएका छन्। त्यसरी ज्ञापनपत्र दिनेमा प्रधानमन्त्री भट्टराईका 'प्रियपात्र'हरूकै बाहुल्य रहेछ। उनका घोषित सल्लाहकार रामेश्वर खनालदेखि 'अघोषित' सल्लाहकार सूर्यनाथ उपध्याय र भोजराज पोखरेल पनि ज्ञापनपत्र दिनेमा रहेछन्। संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि नामहरू सिफारिस गर्छ। यसैले अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा तारेखमा रहेका गुप्तालाई परिषद्मा रहन दिनुनहुने खनालहरूको तर्क रहेछ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई 'भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलता'मा 'प्रतिबद्ध' रहेकाले उनलाई गुप्ताको उपस्थितिले अप्ठेरो नपरोस् भनेर शुभेच्छुकहरूले सुझाव दिएका रहेछन्।
समाजमा गन्यमान्यको हैसियत बनाएका, पढेलेखेका, राज्यको ढुकुटीबाट निवृत्तिभरण पाउने र सरकारको उच्च ओहोदामा नियुक्त भइसकेका विशिष्ठ नागरिकले शासन प्रशासनमा देखिएका विकृति, विसंगतिविरुद्ध औला ठड्याउनु राम्रो हो। यसैले मुद्दा चलिरहेका अवस्थामा गुप्तालाई संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा राख्नु हुँदैन भन्ने उनीहरूको चिन्तालाई अन्यथा अर्थमा लिनु मनासिब नहोला। किन्तु, तिनको चिन्तामा जर्ज अरवेलको उपन्यास 'एनिमल फर्म'मा शासक सुँगुरहरूले उनीहरूलेमात्र स्याउ खान हुने तर्क दिएर अरू पशुलाई दिएको उत्तरजस्तै 'मोर इक्वेल'को ताबेदारीको गन्ध आएको छ। यसैले यति महान् हस्तीहरूको नियतमा पनि शंका लागेको हो।
गुप्ताविरुद्ध त मुद्दा चल्दैछ। कसुर साबित नभएसम्म अभियुक्तले शंकाको सुविधा पाउँछ। किन्तु, प्रधानमन्त्री भट्टराईका प्रियपात्र मानिएका बालकृष्ण ढुंगेललाई त सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरदार ठहर गरी सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको छ। तर, ढुंगेल अहिले कैदमा छैनन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई दण्डबाट उन्मुक्ति दिलाउन राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यसैले कानुनतः ढुंगेल अपराधी नै हुन् र विधिको शासन भएको मुलुकमा भए ढुंगेल संसद्को बैठकमा हैन कारागारमा हुनुपर्थ्यो। माओवादीको शासन भएकाले अदालतले अपराधी ठहर गरे पनि प्रहरीले पक्रने आँट गर्दैन। यसैले ढुंगेल ढुक्कैसँग बसेका छन्। यसरी अपराधीले सरकारी संरक्षणमा उन्मुक्ति पाउनु नैतिक र कानुनी दुवै दृष्टिले उचित अवश्य पनि होइन। यस्तो प्रवृत्तिले बाबुराम भट्टराई इतिहासमा सधैँका लागि कलंकित भएका छन्। रामेश्वर खनाल, सूर्यनाथ उपाध्याय, भोजराज पोखरेललगायतका भट्टराईका शुभेच्छुकहरूलाई यसमा भने पटक्कै चिन्ता लागेनछ। नत्र त, झारा टार्नै भने पनि अदालतले अपराधी ठहर गरेको व्यक्तिलाई यसरी काँध थाप्न हुँदैन भनेर सल्लाह दिन्थे होलान्। समाजप्रतिको नैतिक जिम्मेवारी बोध गरेर बालकृष्ण ढुंगेलका विषयमा पनि बोल्थे होलान्। अहिलेसम्म यिनले ढुंगेलका बारेमा केही बोलेको सुनिएको छैन।
ल भैगो! ढुंगेललाई माफी नदिलाए शान्ति प्रक्रिया बिथोलिन्छ भन्ने धम्की आफ्ना 'आदर्शपुरुष' बाबुराम भट्टराईले दिइसकेकाले बोल्न अप्ठेरो पर्‍यो होला। किन्तु, कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेका अग्नि सापकोटालाई मन्त्री बनाउँदा पनि यिनीहरू बोलेको सुनिएन। प्रहरीले हत्याको योजनाकार ठहर गरेर मुद्दा चलाउन लागेको प्रभु साहलाई मन्त्री बनाउँदा पनि उपाध्याय, खनाल, पोखरेल कसैको बक फुटेन। अहिले सूर्य दोङ मन्त्री नै छन् क्यारे। उनमाथि पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा किटानी जाहेरी परेको छ। प्रहरीको रेकर्डमा त दोङ फरार छन् रे। देशको मन्त्रिपरिषद्मा यस्ता व्यक्तिहरू हुनु उचित त पक्कै होइन होला। तर, यी कसैका बारेमा पनि यिनीहरू बोलेका छैनन्। के यो 'मोर इक्वेलस्'को ताबेदारी भएन?
गुप्ता र उपाध्यायको वैरभाव पुरानै हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुने बेलामा गुप्ताले उपाध्यायको विरोध गरेका थिए रे। त्यही इबी साँध्न गुप्तामाथि मुद्दा चलाइयो रे। अहिले पनि सूर्यनाथ उपाध्याय गुप्ताका पछि लागेको देख्दा त त्यो मुद्दा कतै प्रतिशोध त थिएन भन्ने सन्देह उत्पन्न हुन्छ। आफूले 'बदनाम' गरेर सिध्याउन खोजेको व्यक्तिले सेखी गरेको सहन नसक्नु मानवोचित कमजोरी हो। यसैले उपाध्याय वा गुप्ता एकअर्काका विरुद्ध लाग्नु कुनै आश्चर्य भएन। यत्ति हो, सूर्यनाथ उपाध्यायका पालामा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउँदा घटना हैन अनुहार बढी हेरिएको थियो भन्ने आरोप झन्झन् पुष्टि भइरहेको छ। उपाध्यायकै पालामा अख्तियारमा काम गरेका पूर्वसचिव मोहन बन्जाडेका शब्द सापटी लिँदा उनीमाथि 'सेलेक्टिभ' भएको आरोप लागेको छ। उनको कार्यकालको मूल्यांकन यस लेखको विषय होइन। यसैले विस्तारमा जानु आवश्यक भएन। यत्ति हो, पहिलेदेखि नै इबी रहेका व्यक्तिले नैतिक प्रश्न उठाउँदा अलि कुरीकुरी लाग्ने चाहिँ रहेछ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका घोषित सल्लाहकार रामेश्वर खनालले पनि ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। खनालको संलग्नताले कतै यो ञापनपत्र दिन गुप्ताको सेखी झार्नका लागि भट्टराईले नै लगाएका त हैनन् भन्ने शंका उब्जाएको छ। बेलाबखत प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई गुप्ताले धम्की दिने र घुर्की लाउने जो गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आफ्नो मिति सकिएको संकेत पो पाएर हो कि? जाँदाजाँदै, गुप्ताजस्ता 'बदनाम' व्यक्तिलाई कारबाही गरेको देखाएर 'स्वच्छ छवि' कायम गर्ने उनको रणनीतिअन्तर्गत यो प्रहसन मञ्चन गरिएको हो कि भनेर शंका गर्न सकिने देखिन्छ। काठमाडौंका गल्लीहरूमा नाम चलाउन र समर्थन कमाउन भारतको चर्को विरोध गर्नुपर्छ। अब त्यो उपाय अपनाउन भट्टराईलाई अप्ठेरै लाग्ला। लाज पचाएर उनले प्रयास गरे भने पनि दुनिया हास्छ। अरू केही नभए गुप्तालाई कारबाही गरेरै सही नाक त जोगाउँ्क भन्ने लागेर उनले आफ्ना सल्लाहकारलाई संकेत गरे कि? सत्य नहुनसक्छ, तर सन्देह गर्ने आधार त छ। बाबुराम र जयप्रकाशहरू यस्तामा मुछिनु वा लाग्नु अनौठो होइन। उनीहरू आआफ्नो स्वार्थमा एक हुन बेरै लाग्दैन। कांग्रेस वा एमालेभन्दा माओवादीसँग मिल्नुपर्छ भनेर बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री हुन सजिलो बनाइदिने मधेसी नेतामा गुप्ताको भूमिका अपेक्षाकृत बढी नै छ तर रामेश्वर खनालहरू त्यस खेलमा मिसिन थालेपछि अलि दिक्क लाग्नेरहेछ।
नक्कली भ्याट बिल छपाएर मुलुकका नामी व्यवसायी घरानालेसमेत राजस्व ठगेको प्रकरण सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्रालयका तत्कालीन सचिव रामेश्वर खनाल बढी नै चर्चामा आए। कर छल्ने व्यापारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको प्रयासमा सहमत नभई राजीनामा दिए भनेर सञ्चार माध्यममा आएपछि त झन् खनाल इमानदार कर्मचारीको उदाहरणै बनेका थिए। सामाजिक सञ्जालहरूमा त उनी आदर्श व्यक्तिका रूपमा चित्रित पनि भएका थिए। सञ्चार माध्यमले प्रक्षेपण गरेको उनको छवि हेर्दा मलाई नक्कली लडाकुको पैसा माओवादीले लिएको थाहा पाएपछि अरू कोही नबोले पनि कम्तीमा रामेश्वर खनालले बोल्लान् जस्तो लागेको थियो। अझ राज्यको ढुकुटीमा भएको यति ठुलो घोटालाबारे प्रश्न गर्दा 'शान्ति प्रक्रिया बिथोलिने' चेतावनी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नै दिएपछि त अब खनालले सल्लाहकार पदबाट पनि राजीनामा दिने हुन् कि जस्तो लागेको थियो। किनभने, यो त नक्कली भ्याट बिलभन्दा पनि ठुलो 'बदमासी' हो। कर ठग्ने व्यापारीहरू कम्तीमा सरकारमै त छैनन् नि! माओवादी नेताले त सरकारमै बसेर मुलुकलाई ठगे। यसैले नक्कली लडाकु प्रकरण अझ ठुलो अपराध हो। किन्तु, सूर्यनाथ उपाध्याय, भोजराज पोखरेलहरू त बोलेनन् नै रामेश्वर खनालसमेत यस प्रकरणमा अहिलेसम्म मौन रहेका छन्। बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री र खनाल सचिव हुँदा पनि नक्कली लडाकुका नाममा पैसा निकासा दिइएको थियो। नैतिक जिम्मेवारी दुवैले लिनुपर्ने पनि हो। राज्यको ढुकुटीबाट शिविरमा हुँदै नभएको व्यक्तिका नाममा रकम निकासा लिएर हिनामिना गर्नु भ्रष्टाचार हो कि हैन? त्यो आर्थिक अपराधमा पर्छ कि पर्दैन? अझ त्यसमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको र हालका प्रधानमन्त्री भट्टराई अर्थमन्त्री भएकै बेला परेकाले उनीहरूमाथि औँला ठडिनुपर्छ कि पर्दैन? नेपाल सरकारको सचिवको पदबाट अवकाश पाएका उपाध्याय, पोखरेल र खनाललाई यस्तो प्रश्न सोध्नु नै मूर्खता होला। तैपनि, अदना नागरिकका मनमा यस्ता प्रश्न उठ्दा रहेछन्।
यसैले सोधेको उनीहरूको ज्ञापनपत्र कतै 'मोर इक्वेल'को ताबेदारी त हैन? हुनत, उनीहरू अब ताबेदार हैन इमानदार भएर बढी खुसी हुनसक्ने थि
Posted by Govinda at 12/09/2011 08:59:00 PM No comments:
अराजकताले सीमा नाघिसक्यो । मुलुक कहाँ पुगेर खाडलमा पर्ने हो ? आज एमालेको एक जना कार्यकर्तालाइ सरकारी अड्डामा हुलदंगा गर्दा पक्रेपछि बाटामा उनका साथीहरूले ढुंगामुढा गर्न थाले । त्रिचन्द्र कलेज अगाडि जना चारेक केटाहरू नारा लगाउँदै थिए । तिनका तुलनामा प्रहरी तेब्बर थिए । बाटो प्रहरीले नै बन्द गरिदियो । सुन्धारा जाने माइक्रोवालाले निहुँ पाए । जमलबाटै फर्के । पैसा पुरै असुले । केही तस्बिरहरू
Posted by Govinda at 12/01/2011 07:46:00 PM No comments:
उपभोक्ताले नबुझी पैसा लिनु नैतिक दृष्टिले उचित पक्कै मानिदैन। व्यापार नैतिक हैन नाफाको दृष्टिबाट
गरिन्छ होला तर कम्तीमा सामान्य व्यावसायिक धर्म पालना हुने अपेक्षा गर्नु अर्घेलो नमानिनु पर्ने हो।
एनसेलले पैसा काटेको मेरो अत्यन्त तीतो अनुभव छ। मेरो यस नम्बरमा मैले दसैँपछि मात्रै पनि २००।
रुपियाँ भन्दा बढीको रिचार्ज गरेको छु। म मेरो दैनिक सम्पर्कका लागि एनटीसीकै फोन प्रयोग गर्छु। मैले
प्रयोगै नगरी राख्दा पनि ब्यालेन्स सकिएको सकिएकै हुन्छ। यसैमा जसरी पैसा लाग्ने हो भने त मैले प्रयोग
गर्ने एनटीसीको मासिक खर्च १०००। भन्दा बढी हुनुपर्ने हो तर धेरै हुँदा पनि भदौमा २३६। र असोजमा त
७३। रुपियाँमात्र छ। एनसेलमा यी दुई महिनामा गरेको रिचार्जभन्दा यो रकम बढी छैन। आकस्मिक
प्रयोगका लागि मात्र मैले एनसेलको सिम तयार राखेको हो। मैले प्रयोगै नगर्दा पनि पैसा सकिन थालेपछि
त्यो सिमै नचलाउने निधो गरेर रिचार्ज गर्न छाडेको थिएँ। तर, एनसेलबाट उपभोक्ता ठगिने गरेको यथार्थ
प्रमाणसहित राख्न म अर्को ५०। रुपियाँ खेर फाल्न खोज्दै छु।
१. एनसेलले विज्ञापन गरेको छ रिचार्ज कार्ड किन्दा बढी पैसा नतिर्नु भनेर। तर, गोंगबु आवास
क्षेत्र वरपरबाट मैले ३ वटा बेग्लाबेग्लै पसलबाट दसैपछि ३ पटक कार्ड किन्दा कहीँ पनि ५० मा पाइन। खुद्रा
विकेतासँग ५० रुपियाँ नै लिने हुनाले थप पैसा नलिई दिन नसक्ने व्यापारीले भने। फोनको रिचार्ज कार्ड
किन्न गएको उपभोक्ता दबलफसल गरेर त बस्दैन। मैले पनि एनसेलको विज्ञापनको कुरा उठाएँ तर किनेर
फर्केँ। पछिल्ला कार्ड त झन् यो ब्लग लेख्नैका लागि किनेकाले वित्रे्कतालाई एनसेलको सूचना स्मरण गराएँ।
वित्रे्कताले ५५ घटी ५० रुपिर्याको कार्ड दिन मानेनन्। मैले उनलाई पसलको नाम लेखे हुन्छ त भनेर सोधेँ
पनि। उनले स्वीकृति दिए। सामाखुसी चोक नजिकै आवास क्षेत्र पस्नलाग्दा केशव मोबाइल मर्मत तथा विक्री
केन्द्रबाट ल्याएको सिरियल नंबर १४००४८०००२२६६७७४ को ५० रुपियाँको कार्ड रिचार्ज गर्न ९००१२ मा
शुकबार बिहान ९.५१ एसएमएस पठाएँ। रिचार्ज सफल भएको जनाउ दिने एनसेलको एसएमएस आयो ९.५२
मा। त्यसमा ४९।०२ पैसा ब्यालेन्स भएको सूचना पाएँ। यस क्रममा मेरो ५।९८ पैसा त नोक्सान भइसकेको
२. मैले मेरो ९८०८७५५५२२ नंबरको एनसेलको प्री पेड सिम ब्ल्याकबेरी कर्भ सेटमा हालेको छु।
यसैमा हाल्नुको तात्पर्य चाहिँ मैले इन्टरनेट चलाएको बेला सजिलै हिसाब थाहा पाउनु हो। हेरौँ, एनसेलको
सिममा त्यसै पनि पैसा सकिँदै जान्छ भन्ने मेरो सन्देह कति सही हुन्छ?
३. शुकबार साँझ इमेल अपडेट भएन। रिफ्रेस गर्दा वर्किङ डाटा कनेक्सन नभएको जनाउ फोनले
दियो। अनि ९००११ मा एसएमएस पठाएर ६.५३ मा ब्ल्यालेन्स जाँच्दा ४८।८८ बाँकी देखियो। बीचमा इमेल
अपडेट भएको थियो। त्यसैको १४ पैसा काटिएको हो कि? शनिबार बिहान पनि वर्किङ डाटा कनेक्सन
नभएको जनाउ फोनले दियो। अनि पुनः ९००११ मा एसएमएस पठाएँ। शनिबार बिहान ४.४० मा पैसा ४२।०४
बाँकी भएको देखाएको छ। बाँकी रु. ६।८४ कता गयो? अचम्म, शनिबार साँझ १७.५८ मा ब्ल्यालेन्स ४८।७५
देखायो तर इन्टरनेट कनेक्सन भने भएन। शनिबार साँझ एउटा एसएमएस पठाएँ। राति ९.२७ मा ४७। ५१
ब्यालेन्स देखियो। आइतबार बिहान इन्टरनेट कनेक्सन भयो। रिफ्रेस गरेँ। जम्मा २१ केबी डाटा एक्सचेन्ज
भयो। ब्यालेन्स ५.१५ मा ३१।९५ मात्र बाँकी देखायो। आइतबार बिहान रु १।६४ एउटा कल पनि गरेँ। त्यपछि
९.३१ मा ब्यालेन्स रु ३१।२२ रहेको जनाउ आयो। यो ३१।९५ मा १।६४ घट्दा ३१।२२ हुने हिसाब मैले मरे
बुझन। अर्को कल गरेँ ४१ पैसाको। अनि एउटा एसएमएस गरे। आइतबार बिहान १०.१६ मा ३६।०८ पैसा
४ सोमबार एउटा कल र एउटा एसएमएस गरे। राति ९.३० मा ब्यालेन्स २६।५६ देखायो।
मंगलबार बिहानसम्ममा २०४ केबी डाटा एक्सचेन्ज भएको छ। बुधबार बिहान ५.१६ मा ब्यालेन्स १९।१७
देखाएको छ। मंगलबार केही गरेको छैन। डाटा एक्सचेन्ज ३१६ केबी पुगेको देखाएको छ। बुधबार पनि
इन्टरनेट रिफ्रेस गर्नेबाहेक अरू केही गरेको छैन। बिहीबार साँझ ब्यालेन्स भने १२।५९ देखाएको छ। इन्टरनेट
नचलेपछि फोन बन्द गरेर खोल्नुपर्‍यो। पछिल्लो पटक १२० डाटा एक्सचेन्ज भएको छ। अर्थात् कुल ४३६
केबी डाटा र २ वटा कल तथा २ वटा एसएमएस पठाएकोमा ६ दिनमा ३७। रुपियाँ खर्च भयो। ब्यालेन्स हेर्न
९००११ मा पठाएको एसएमएसको त पैसा लाग्दैन होला नि। शुकबार बिहान ब्यालेन्स रु. १०।७६ देखाएको छ।
मैले गरेको कल र इन्टरनेटको खर्च घोषित दरमा रु १०। को हाराहारीमा हुनुपर्छ। अरू रु. ३०। जति कसरी
सकियो मैले थाहा पाउन सकिन। मैले नबुझेको पनि हुनसक्छ। मभन्दा पनि नबुझ्ने अरू उपभोक्ता पनि
होलान्। प्रत्येक मेसेजसँगै आउने पीआरबीटीको विज्ञापन मैले सजग भएरै बेवास्ता गर्दै गएँ। कतिले त
बुझ्दैनबुझी ओके बटन थिच्न सक्छन्। सबै सूचना अंग्रेजीमा हुन्छ। अंग्रेजी नजान्ने उपभोक्ता पनि पक्कै
होलान्। तिनलाई नबुझ्ने जानकारी दिएर उनीहरूले थाहै नपाई पैसा लिनु 'ठगी' हो कि होइन? व्यावसायिक
धर्मभित्र पर्छ कि पर्दैन? उपभोक्ताले बुझ्दैनन् भन्ने जानेरै यस्तो आक्रामक व्यापारिक रणनीति अपनाइएको हो कि एनसेलले यसमा विचारै नगरी अपनाएको रणनीतिको परिणति यस्तो भएको हो ?
जेहोस्, मैले त अभर नपरी अब एनसेल नचलाने विचार गरेको छु । तैपनि यथार्थ के होला भन्ने जिज्ञासा
बाँकी नै छ ।
Posted by Govinda at 11/18/2011 06:27:00 AM No comments:
नेपाली आमाको सक्कली रूप
नयाँ सडकमा आज दिउँसो ४.२३ बजे भूगोल पार्कको बाहिर माग्न बसेकी आमा । बाबुरामको चियापानमा आधा कम गरेको भए र उनको जन्तीमण्डलेको संख्या आधा घटाए कम्तीमा यस्ता आमाहरूलाइ सडकबाट उठाएर पाल्ने पैसा त पुग्थ्यो कि ?
Posted by Govinda at 11/17/2011 06:21:00 PM No comments:
माओवादी नेता/कार्यकर्ताले बन्दुक देखाएर र हानेर लुटेको जमिन फिर्ता गर्ने कार्यलाई भूमिसुधारसँग जोड्नुभन्दा ठुलो पाखण्ड केही हुनसत्तै्कन। नेपालको भूमि व्यवस्थामा समय सापेक्ष जनमुखी सुधार हुनु आवश्यक छ। भूमिसुधारको आग्रह सामाजिक न्यायका लागि हो। किन्तु, माओवादी नेता/कार्यकर्ताले अन्यायपूर्वक जमिन 'कब्जा' गरेका हुन्। बलपूर्वक व्यक्तिको सम्पत्ति खोस्नु प्रचलित कानुन र नैतिक दृष्टि दुबैबाट 'लुट' हो। अन्याय कहिल्यै पनि न्यायको जग बन्न सत्तै्कन। लुटलाई न्याय देख्नु चरम दृष्टि दोष हो। यसैले माओवादीले लुटेको जमिन वास्तविक हकदारलाई फर्काइदिनु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। भूमिसुधारलाई लुटेको जमिन फिर्ता गर्ने सर्तका रूपमा लिनु त अपराधको मतियार हुनु नै हो।
धेरै पटक एनेकपा(माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अरू दलहरूसँग लेनदेन गर्नुपर्दा 'कब्जा गरेको जमिन फिर्ता गर्ने' सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन्। माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) शीर्ष नेताहरूबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा पनि जमिन फिर्ता गर्ने बुँदा समावेश छ। किन्तु, माओवादी नेताहरू अरू सहमतिजस्तै यसप्रति पनि इमानदार देखिएनन्। केही नेताले त जमिन फिर्ता गर्ने सहमतिको खुलेरै र संगठितरूपमै विरोध गरेका छन्। 'प्रगतिशील' मुकुन्डो भिरेकाहरूका लागि यो लुट धनी र गरिबबीचको 'वर्ग संघर्ष' बनेको छ। बन्दुक देखाएर जबर्जस्ती जग्गाबाट बेदखल गरिएका निमुखा नेपाली नागरिक सर्वहाराहरूको 'वर्ग शत्रु' ठहरिएका छन्। यसैले उनीहरूका आँखामा यो भूमिसुधार हुन नसकेकाले अपरिहार्य 'क्रान्तिकारी कदम' देखिएको हुनुपर्छ। 'ठुला' चिन्तक विश्लेषकले त जमिन कब्जाजस्तो चानेचुने विषय उठाउने प्रश्नै भएन। यसैले बन्दुक देखाएर लुटिएको जमिन नफर्काउनुलाई 'सही' सिद्ध गर्ने प्रयास भइरहेको हुनुपर्छ।
यस क्रममा माओवादी प्रचारवाजीले पनि केही भ्रम उत्पन्न गरेको देखिएको छ। अरू राजनीतिक दल वा विश्लेषकबाट त्यस्तो भ्रम निवारण गर्ने प्रयास हुनसकेको छैन। जग्गा लुटिनेहरू अधिकांश निरीह र निमुखा छन्। उनीहरू माओवादीको भन्दा चर्को स्वरमा बोल्नै सत्तै्कनन्। बोल्नुपर्नेहरूले वास्तै गरेका छैनन्।
माओवादी नेता/कार्यकर्ताले बन्दुकका बलमा लुटेको जमिनसम्बन्धमा उत्पन्न गरिएको पहिलो भ्रम जग्गा लुटिनेहरू ठुला जमिनदार हुन् भन्ने हो। जग्गा लुटिएर उठिबास लाग्नेमा अधिकांश सामान्य किसान छन्। उनीहरूमध्ये धेरै परिवारको आफूले कमाएर खानसम्म पुग्ने जमिन थियो। त्यही पनि बिनाकसुर लुटिएको छ। जग्गा लुटिनेहरू सबै जमिनदार हुन् भन्नु त माओवादी नेता / कार्यकर्ताले मारेका सबै जना सुराकी, अपराधी थिए वा माओवादी भनेर सुरक्षाकर्मीले मारेकाहरू सबै बन्दुक बोकेर हिँडेका 'आतंककारी' थिए भन्नुजस्तै हो। माओवादी वा सुरक्षाकर्मीकै मतियारबाहेक अरूले त्यसो भन्न पक्कै सत्तै्कनन्। माओवादीले मारेका अधिकांश व्यक्ति निहत्था नागरिक थिए। उनीहरूको कसुर अरू पार्टीका समर्थक, नेता, कार्यकर्ता हुनु वा माओवादीको हैकम नमान्नुमात्र थियो। मारिनेमध्ये कतिपय त माओवादीका स्थानीय नेता कार्यकर्ताको व्यक्तिगत रिसइबी भएका सामान्य नागरिक थिए। माओवादीका नाममा सुरक्षाकर्मीबाट मारिएकाहरू पनि अधिकांश निर्दोष नागरिक थिए। तीमध्ये केही माओवादी समर्थक थिए होलान् तर त्यो त अपराध होइन। अपराधै भए पनि सुरक्षाकर्मीले मार्न पाउने अधिकार कुनै कानुनले दिएको छैन। त्यसमा पनि कतिपय त घानमा परेका मात्रै हुन्। त्यस्तै जग्गा लुटिनेहरू पनि अधिकांश ठुला जमिनदार छैनन्। तीमध्ये धेरै जना पहाडका छन्। पहाडमा धेरै जमिन हुनेहरूको संख्या यसै पनि थोरै छ। त्यसमाथि जग्गा लुटिनेमा ती बिरलै परेका छन्। उनीहरूले त पैसा दिएरै माओवादी नेतालाई किनेका जो थिए। जमिनदारै भए पनि व्यक्तिको जग्गा बन्दुकका बलमा लुट्न त पाइँदैन। कुन आधारमा यिनलाई जमिनबाट बेदखल गरियो? राज्यले के यिनको जत्तिकै जमिन भएका अरूको जग्गा पनि खोसेको छ? वा खोस्ने हो? कि माओवादी नेता/कार्यकर्ता चाहिँ विशेष दर्जाका नागरिक हुन्? उनीहरूले जस्को सम्पत्ति लुटे पनि हुन्छ? जस्को ज्यान लिए पनि हुन्छ? माओवादी नेताहरूको रिसइबीको सिकार भएकालाई राज्यले पनि संरक्षण नगर्ने हो भने किन चाहियो यो राज्य? माओवादी नेता/कार्यकर्तालाई खतबात माफ हुने कुनै कानुन त छैन!
लुटेको जग्गा भोगचलन गर्नेहरू चाहिँ गरिब हुन् भन्ने अर्को भ्रम पारिएको छ। त्यो पनि पूर्ण सत्य होइन। लुटेको कतिपय जग्गामा माओवादी नेता/कार्यकर्ताले मोही लगाएर कुत खाएका छन्। जुम्लाको उदाहरण अपवाद हैन। कतिपय स्थानमा जग्गा लुटेर बेचेका उदाहरण पनि सार्वजनिक भएका छन्। लुटिएको जग्गाको खनजोत गर्नेहरू गरिबै रहेछन् भने पनि तिनलाई राज्यले कानुनअनुसार जमिन दिनुपर्ने हो। अरूको लुटेर जग्गा धनी हुन पाइने हो भने राज्यको के काम? किन चाहियो कानुन? किन गर्नुपर्‍यो भूमिसुधार? लुटलाई राज्यले मान्यता दिने हो भने बल हुने सबैले लुट्न थाल्नेछन्। लुटाहाहरूलाई सट्टाभर्ना दिनुको तात्पर्य अरूलाई पनि लुट भन्नु होइन?
जमिनलाई सामान्य उत्पादनको साधन ठान्ने अर्को भ्रमले पनि यस प्रकरणलाई जटिल बनाएको छ। जग्गा लुटिने प्रकरणमा माटो र मुटुको सम्बन्ध पनि जोडिएको छ। जमिनलाई सामान्य उत्पादनको स्रोतमात्र ठान्नु चरम भौतिकवाद हो। व्यक्तिको जरो जमिनमा गडेको हुन्छ। त्यसलाई उखेल्न खोज्दा पक्कै प्रतिवाद हुन्छ। तत्काल प्रतिवाद गर्ने बल नपुगे व्यक्ति मौका पर्खेर बस्ला तर आमा ठानिएको जमिनलाई त्यत्तिकै त पक्कै छाड्दैन। जमिन पैसाजस्तो हैन। मान्छेले पकेट मारिएको समाचार रमाइलो मानेर सुनाउन सक्ला तर बारीमा गएको पहिरो मुटुमा पनि जान्छ। माओवादी नेता/कार्यकर्ताले भैँसी गोरु लुटेर काटेर खाएको सजिलै बिर्से पनि जमिन खोसेको र आफन्त मारेको बिर्सन कसरी सकिन्छ? व्यक्तिको 'नाभी गाँसिएको' हुन्छ जमिनसँग। उसको अस्तित्व जमिनसँग जोडिएको हुन्छ। जमिन राज्यको स्वामित्वमा हुन्छ भन्ने धारणा मध्ययुगको सामन्तवादी चिन्तनको अवशेष हो। व्यक्तिलाई गौण र मामुली ठान्ने तर शासकलाई सर्वशक्तिशाली मान्ने अनुदार सामन्ती सोचले जमिन राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने मान्यता अगाडि सारेको हो। नत्र, आमा ठानिने जमिनमा सन्तानबाहेक अरू कसैको हक कसरी लाग्छ?
चरम भौतिक दृष्टिकोण राखेर जमिनलाई उत्पादनको साधनमात्र मान्ने हो भने पनि जमिनमात्र खोस्नु त अन्याय नै हुन्छ। कि माओवादीले जस्तै सबैले बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता स्वीकार गर्नुपर्‍यो? कारखाना त झन् सोझै उत्पादनको साधन हो। मजदुरको श्रमले नै मूलतः यसको पुँजी बढ्ने हो। अतिरिक्त श्रमको सिद्धान्त कम्युनिस्टहरूको त मन्त्रै हो। उत्पादनको साधनमा कब्जा गर्ने हो भने त पहिले कारखानाको सम्पत्ति श्रमिकहरूलाई बाँड्नु पर्‍यो नि!
अहिले लुटिएको जमिन जस्ले भोग गरेको छ त्यो उसको पसिनाको कमाइ हैन। त्यस्तो जमिन नफर्काउँदा अन्याय हुन्छ तर फर्काउँदा अन्याय हुँदैन। लुटेको जमिन भोगचलन गर्नेको फलिफाप पक्कै हुन्न। धर्मका विश्वास गर्ने हो भने त सन्तानले समेत दुःख पाउँछन्। भोगचलन गरिरहेका हरूमा वास्तविक गरिब पनि छन् भने तिनले पनि उनीहरूसरहका अरू नेपाली नागरिकले जमिन पाउँदा उनीहरूले पनि पाउने नै छन्। राज्यका लागि नागरिक सबै समान हुन्। राज्य सञ्चालकहरूले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। सरकारले अधिकार संविधानबाट पाएको हो। संविधानले नागरिकबीच भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने निर्देश गरेको छ। संविधान नमान्ने सरकारको राज्य चलाउने नैतिकता र वैधता दुवै समाप्त हुन्छ। यसैले जग्गा लुटिएकाहरूलाई न्याय दिनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो।
अहिलेको सरकारबाट नैतिकता वा मानवीय आधारमा व्यवहार हुने अपेक्षा गर्नु सायद उपयुक्त नहोला। किनभने, कम्युनिस्टहरू यी दुवै शब्दलाई बुर्जुवाको भ्रमजाल ठान्छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सत्ताको बिलो पाए जे सुकैमा पनि किनाराको साक्षी बस्ने रहेछ भन्ने बिस्तारै देखिँदै गएको छ। बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ताले त झन् त्यसलाई पुष्टि नै गरेको छ।
नैतिकता र न्यायको सम्मान गर्ने हो भने जग्गा लुटिएका निर्दोष निहत्था नेपाली नागरिकलाई क्षतिपूर्तिसहित तत्काल फिर्ता दिलाउनु पर्छ। अहिलेसम्म लुटेको जमिन कब्जा गरेर भोग चलन गर्नेले कुत तिर तिर्नुपर्छ। कम्तीमा लुटेको जग्गा कुतमा लगाएर खाने माओवादी नेता/कार्यकर्ताले त फिर्ता गर्नैपर्छ। अनिमात्र उनीहरूको लुटेको अपराध मटिनेछ। क्षमा योग्य हुनेछ। यस्तै, प्रतिशोधको बीउ पनि नराख्ने हो भने क्षतिपूर्तिका साथै जग्गा लुट्नेहरूले लुटिनेहरूसँग क्षमा माग्नुपर्छ।
नैतिकता, मानवीयता र प्राकृतिक न्यायको आग्रह त यही हो। हैन, यी तीनै शब्दलाई 'बुर्जुवाका भ्रमजाल' नै ठान्ने हो भने बल हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने घोषणा गरौँ र लोकतन्त्र र विधिको शासनको चर्चा गर्नै छाडौँ
Posted by Govinda at 11/16/2011 05:20:00 AM No comments:
Posted by Govinda at 11/11/2011 09:12:00 PM No comments:
धेरै वर्षपछि जिम जान थालेको छु । हल्का व्यायाम
Posted by Govinda at 11/11/2011 08:58:00 PM No comments:
सप्तरंगी इन्द्रेनी धेरैपछि
नागरिकको कार्यालयबाट बिहीबार अपराह्न ४.५८ बजे देखिएको इन्देनी ।
Posted by Govinda at 9/29/2011 07:59:00 PM No comments:
जम्मुबाट आएका मगन्तेहरू
यी वृद्धा र बालिकाहरू जम्मुका हुन् रे । हजुर आमा र नातिनी बुधबार बिहान म्हेपीमा माग्दै थिए । अर्को ढोकामा यी दुइ बालिका थिए । एउटै परिवारका जस्ता छन् । यिनलाइ माग्न पठाएर खानेहरूलाइ राज्यले खोजेर सजाय गर्नुपर्ने हैन र?
Posted by Govinda at 9/28/2011 08:26:00 PM No comments:
राज्य नकच्चरो भएपछि ...
यी दृष्टिविहीन अपांगता भएका व्यक्तीहरू बुधबार बिहान म्हेपीमा माग्दै । यिनलाइ माग्नुपर्ने बनाउने राज्य हो । उत्तरदायित्व पूरा नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो नि ।
Posted by Govinda at 9/28/2011 08:22:00 PM No comments:
नयाँ सहस्राब्दी शान्ति, समृद्धि र स्वतन्त्रताको हुने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए। हुन पनि सोभियत साम्राज्यको पतनसँगै 'शीतयुद्ध' सकिएको थियो। समृद्ध, उदार र लोकतान्त्रिक अमेरिकामात्र विश्व महाशक्तिका रूपमा बाँकी थियो। अल कायदा, तालिबानजस्ता संगठनहरूको फाटफुट नाम सुनिए पनि तिनले संसारकै भाग्य र भविष्यमा ग्रहण लगाउनसक्लान् भन्ने कसैले पत्याएको थिएन। शीतयुद्धताका चर्को स्वरमा 'अमेरिकी साम्राज्यवाद'को विरोध गर्नेहरू पनि बर्लिनको पर्खाल ढलेको उत्सवमा सामेल हुन थालेका थिए। अमेरिका सबैको सपनाको संसार बन्न पुगेको थियो।
अचानक, सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अल कायदासम्बद्ध आतंककारीले अमेरिकी वैभवको प्रतीक मानिने न्युयोर्कस्थित विश्व व्यापार केन्द्रको भवन 'टि्वन टावर' मा हवाइजहाज ठोकाएर ध्वस्त पारिदिए। एकमात्र विश्व महाशक्ति अमेरिकाको शक्तिको प्रतीक मानिने राजधानीस्थित रक्षा मन्त्रालयको भवन 'पेन्टागन'मा पनि त्यही प्रकृतिको आक्रमण भयो। अर्थात्, अमेरिकाको वैभव र शक्ति दुवैमाथि आक्रमण भयो। धेरैले त्यसलाई उदार समाज र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको आक्रमण ठाने। अमेरिकालाई माया गर्नेहरू त बढी नै विचलित भए।
आतंककारी समूहले नियोजितरूपमा हवाइजहाज ठोकाएको ठहर भएपछि अमेरिकाले निकै चर्को प्रतिक्रिया व्यक्त गर्‍यो। राष्ट्रपति जर्ज बुसले 'आतंकविरुद्ध युद्ध'को घोषणा गरे। संसारले अमेरिकालाई साथ दियो। आतंकविरुद्ध अपूर्व विश्व एकता देखापर्‍यो। विशेषगरी पश्चिम युरोपले अमेरिकाको गुन तिर्‍यो। अल कायदा र तालिबानको 'आश्रय' मानिएको अफगानिस्तानमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)ले अमेरिकी नेतृत्वमा सैनिक कारबाही गर्‍यो। त्यति बेलासम्म पनि विश्व जनमत अमेरिकाकै पक्षमा थियो। यही समर्थन र सद्भावको सहमा राष्ट्रपति बुसले घोषणा गरे- ' जो हाम्रा पक्षमा छैनन्, उनीहरू हाम्रा विरोधी हुन्।' बुसको त्यही अहंकारले अमेरिकाका साथी घट्न थाले। युद्धमा अमेरिका जितेर पनि हार्न पुग्यो।शीतयुद्धको समाप्तिपछि नै अमेरिकी अहंकार बढेको थियो। संसार 'एक ध्रुवीय' भएको भ्रममा अमेरिकी शासकहरूले आफूलाई विश्वका पहरेदार ठान्न थालेका थिए। त्यस अहंकारले संसारभरमा भित्रभित्रै अमेरिकाविरुद्ध विद्वेषको बीउ रोप्यो। अहंकारको जालोले टालिएका अमेरिकी शासकका आँखा तै पनि खुलेनन्। उनीहरूले अमेरिकाले जे गर्छ त्यही लोकतान्त्रिक र न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने ठान्न थाले। त्यही दम्भले अमेरिकाले जताततै शत्रु जन्मायो। स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, खुला समाजजस्ता आफ्नो पहिचान गाँसिएका शाश्वत मूल्यमा पनि अमेरिकाले दोहोरो मापदण्ड अपनायो। अर्थात्, अमेरिकाले आफ्नो धर्म (स्थापनाको सिद्धान्त)को उपेक्षा गर्‍यो। कतै न कतै यही उपेक्षाले आतंककारीको मनोबल उकासेको हुनुपर्छ। अफगानिस्तानमा रुसी हस्तक्षेपविरुद्ध अमेरिकाले पाकिस्तानसमेतको सहयोगमा तालिबान जन्माएको थियो। तालिबानीलाई अमेरिकाले नै प्रशिक्षण, पैसा र प्रविधि दिएको हो। तिनै तालिबानपछि अमेरिकाका परमशत्रु बन्न पुगे। दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकालाई सबैभन्दा बढी क्षति तिनैका कारण पुगेको छ।
अमेरिकामाथिको आक्रमणपछि नागरिक स्वतन्त्रतामा, हवाइ यात्रामा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा अनुदार पक्षको प्रभाव बढेको छ। यसलाई सभ्यताको द्वन्द्व ठान्ने हो भने उदार मूल्यहरूबाट पछि हट्ने यो प्रयास कट्टरपन्थीको जीत हो। यस व्यवहारले अमेरिकाको साखमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ। सम्भवतः अलकायदाले पाएको यही हो। त्यस घटनाले उदार मूल्यमा विश्वास गर्ने समाजमा निरीहता, जोखिम र छटपटी उत्पन्न गरेको थियो। त्यसैले अमेरिकामाथि आक्रमण हुँदा संसारको सर्मथन उसले पाएको हो। तर, राष्ट्रपति बुसले त्यस सद्भावलाई विश्वको लाचारी ठाने। यथार्थमा उनको अहंकारकै कारण अमेरिका एक्लिँदै गयो। ग्वान्तानामो बेको जेललाई अमेरिकीले नै कलंक ठानेे। शुभ संकेत चाहिँ के हो भने स्वयं अमेरिकामै कट्टरपन्थीहरू एक्लिए। बाराक हुसेन ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा विजयी हुनु कट्टरपन्थी दम्भको पराजय र अस्वीकृतिको अभिव्यक्ति हो।
बुसको सुरु गरेको 'आतंकविरुद्धको युद्ध'मा सुरुमा पश्चिम युरोपले तनमनधनले सहयोग गरेको थियो। हुनत, अहिले पनि नेटो अलकायदा र तालिबानविरुद्धको लडाइँमा संलग्न छ तर युरोपेलीहरू अमेरिकासँग टाडिन खोजेका छन्। अमेरिकी नेतृत्व अब युरोपका लागि स्वीकार्य नरहेको जनाउ उनीहरूले दिइसकेका छन्। मध्यपूर्वको जागरण र विद्रोहमा अमेरिकाभन्दा युरोपले नेतृत्व दिएको छ। लिबियामा भएको हस्तक्षेप फ्रान्सको अगुवाइमा हुनु यसैको संकेत हुनुपर्छ। बर्लिनस्थित अमेरिकी चर्चमा भएको स्मृति सभा युरोपेली जनमानसमा भएको परिवर्तनको झलक हो। आक्रमणलगत्तै २००१ मा त्यहाँ भएको कार्यक्रममा त्यहाँ करिब दुई लाख जना जम्मा भएका थिए भने सम्झना सभामा दुई सय जना जतिमात्रै थिए।
आक्रमणलगत्तै अमेरिकालाई साथ दिने पाकिस्तान अहिले पछुताएको देखिएको छ। अफगानिस्तानमा अमेरिकी नेतृत्वमा नेटोले सैनिक कारबाही गरेपछि तालिबानी र अल कायदाका नेता पाकिस्तान पसे। उनीहरूले आतंक पनि सँगै लिएर आए। फलस्वरूप, अहिले पाकिस्तान 'जेहादी आतंक'बाट सबैभन्दा बढी पीडित भएको छ। पाकिस्तानी सेना सबैभन्दा बाक्लो उपस्थिति भएकै सहरमा अल कायदाका नेता बिन लादेन मारिए। यसले पाकिस्तानको शासनप्रति अमेरिकामा चरम अविश्वास उत्पन्न भएको छ। अमेरिकाले युद्धपछि वर्षको डेढ खर्ब डलर जति सहायता पाकिस्तानलाई दिएको छ। तैपनि, पाकिस्तानले आफूलाई आतंकबाट सबैभन्दा पीडित मुलुक भन्न र ठान्न थालेको छ। पाकिस्तानको भौगोलिक क्षेत्रभित्रै अमेरिकाले सैनिक कारबाही गर्ने गरेको छ। पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आईएसआईको तालिबानीसँगको सम्बन्धका कारण सूचना दिइए चुहिने डरले होला त्यस्ता कारबाहीमा पाकिस्तानलाई सुइँको पनि दिइँदैन। लादेनै मारिँदा पाकिस्तान पनि सरकार र सेनाले थाहा दिइएन। पाकिस्तानको आजको अवस्था हेर्दा 'सार्वभौमसत्ता'कै परिभाषा फेर्नुपर्ने हो कि भन्ने लाग्छ। यस्तै, यति धेरै अविश्वास भएपछि मित्रता झन् डरलाग्दो हुनसक्छ।
अल कायदा र तालिबानजस्ता संगठनले जति विध्वंश मच्चाएर पनि अन्ततः हार्नैपर्छ। नत्र, सभ्यता हार्छ। बिन लादेनलगायतका अलकायदाका अगुवा मारिए। मुसलमान विश्वमै अल कायदाको साख १० वर्ष पहिलेभन्दा धेरै गिरेको छ। पश्चिममा उसको समर्थन घटेको छ। प्रविधि र पैसा आउने बाटो साँगुरो भएको छ। अहिले संगठन छितरिएको छ। यसैले झन् खतरनाक भएको छ। तर, विध्वंश गर्नमात्र सक्ने संगठन हुन पुगेको छ। रुसी सैनिकलाई परास्त गरेर मुलुकलाई 'मुक्त' गर्ने तालिबान अब 'जेहादी' भन्दा बढी 'अपराधी' ठानिन्छ। इस्लामी जगतमै पनि कतिपय पहिलेका समर्थक र सहयोगीले सम्बन्ध तोडेका छन्। सायद, अब अल कायदा विश्व स्तरको चुनौती रहेन। ( त्यसो त पहिले पनि थिएन कि?) अरब जागरण र त्यहाँ लोकतन्त्रको खोजी पनि प्रकारान्तरले कट्टरपन्थीहरूको पराजय नै हो।
प्यालेस्टिनी राज्यको विवादमा अमेरिकाले फेरि साथी गुमाउने लक्षण देखिएको छ। प्यालेस्टिनी जनतालाई ओबामाले पनि स्वतन्त्र राष्ट्रको सपना देखाएका थिए। अहिले पुरा हुने बेला आउँदा अमेरिकाले निषेधको बाटो रोजेको छ। हुनत, इजरायली र प्यालेस्टिनी नेताहरूले वार्ताबाटै स्वतन्त्रताको समस्या समाधान गरेको भए उत्तम हुनेथियो। अमेरिकाले यसमा बढी नै जोड दिनुपर्थ्यो। सहजीकरणमा अग्रसर हुनुपर्थ्यो। इराक आक्रमणबाट गुमेको अरब जनताको सद्भाव फर्काउन यो सर्वोत्तम उपाय हुन्थ्यो। यस पटक पनि अमेरिकाले प्यालेस्टिनी राष्ट्रको 'धाई' बन्ने अवसर गुमाउने लक्षण छ। इजरायललाई जसरी नै प्यालेस्टिनलाई पनि निषेध गर्न सकिँदैन। अमेरिकाले नचाहे पनि ढिलोचाँडो प्यालेस्टिन राज्य त बन्छ। दलगत राजनीतिक लाभहानिका कारण लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताको उपेक्षा गर्ने 'रिपब्लिकन रोग'बाट ओबामा पनि मुक्त हुननसक्नु अमेरिका र प्रकारान्तरले संसारकै अर्को दुर्भाग्य हो।
आर्थिक कारणले पनि अब अमेरिकाले 'विश्व प्रहरी'को भूमिका पूरा गर्न सत्तै्कन भन्ने सन्देह धेरैले प्रकट गरेका छन्। सम्भवतः यही बुझेर ओबामाले सुरुका दिनमा राष्ट्रसंघलाई अगाडि सार्ने नीति लिएका थिए। विश्वको बहुध्रुवीय चरित्रलाई स्वीकार गरेर उनले युरोपमा सद्भाव पनि बढाएका थिए। आफ्नो गुण जोगाउन भने उनले प्रयास गरेको देखिएन। यसैले अहिले अमेरिका द्विविधामा देखिएको छ। किन्तु, अझै पनि निकट भविष्यमा अमेरिकाको ठाउँ लिने कोही देखिँदैन। यसो त, अमेरिकाको गन्तव्य पनि धेरैजसो नियतिले तय गर्ने गरेको छ। व्यापारमा रमाउने मुलुकलाई युद्धमा होमिने रहर त नहुनु पर्ने हो तर कर नपरे पनि 'जाइ कटक गर्ने' प्रवृत्ति अमेरिकी चरित्र बनेको देखिएको छ। सन् १९९० पछि अमेरिकाले संसारका सबै महादेशमा सशस्त्र हस्तक्षेप गरेको छ तर झन् एक्लिएको छ। शीतयुद्धपछि संसार बदलिइसकेको छ। चीन आर्थिक र सामरिक दुवै दृष्टिले निकै शक्तिशाली र आक्रामक बन्दै गएको छ। भारतको उदयले अमेरिका दक्षिण एसिया नीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। मध्यपूर्व र अफ्रिकामा लोकतन्त्रको लहर चल्नु सुखद संकेत भए पनि त्यसले अमेरिकालाई चुनौती नै थपेको छ। अब त्यहाँ पनि इजरायलमुखी परम्परागत नीति बदल्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भइसकेको छ। युरोपसँग अब अमेरिकाको प्रतिस्पर्धा र सहयोग दुवै नयाँरूपमा हुनेछ। विश्वयुद्ध पछिको पुस्ता निर्णायक बन्दै जाँदा युरोप र जापानमा पनि अमेरिकाप्रतिको धारणा बदलिनसक्छ। आश्चर्य, संसार यति बदलिए पनि अमेरिकाले यसलाई स्वीकार गरेको चाहिँ देखिएको छैन।
अमेरिकाले आफ्नो धर्म ( स्थापनाको सिद्धान्त) को जहाँ पालना गर्‍यो त्यहाँ उसले जितेको छ। जापान र जर्मनीलाई ध्वस्त पार्ने अमेरिकै हो तर त्यहाँ उसले आफ्नो धर्मको पालना गर्‍यो। अहिले ती दुवै मुलुक अमेरिकाका भरपर्दा साथी र उदार समाजका उदाहरण बनेका छन्। भियतनाम र इराक आक्रमण अमेरिकाको अर्घेल्याइँ थियो। भियतनामबाट त नराम्ररी हारेरै फर्कनु पर्‍यो भने इराकको जित हारभन्दा बढी प्रत्युत्पादक हुने लक्षण देखिन थालेको छ। अमेरिकाको जग उदार लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता, स्वतन्त्रता र वैयक्तिक मर्यादाका टिकेको छ। तिनलाई बिर्सेर वा उपेक्षा गरेर अमेरिका अगाडि बढ्न सक्तैन। भनिन्छ, 'धर्मो रक्षति रक्षित'।
Posted by Govinda at 9/28/2011 08:03:00 PM No comments: